Mawiricheya Matsva kana Wiricheya Yakashandiswa: Ndeipi Iyo?
Uri kuedza kufunga kuti chii chakanakisa wiricheya pane zvaunoda? Kune huwandu hwemhando dzakasiyana dzemawiricheya pamusika nhasi. Vanouya mumarudzi akasiyana-siyana, maitiro uye kushanda. Pane zvinhu zvakati wandei zvauchazoda kufunga nezvazvo paunenge uchitenga wiricheya yakakodzera pane zvaunoda.
Sarudzo yekupedzisira inofanirwa kunge iri yemushandisi sezvo vari ivo vanozofanira kurarama nesarudzo iyoyo kwemakore anotevera. Chiremba wako kana physiotherapist anogona kukubatsira kuti uite sarudzo chaiyo yezvaunoda.
Kuita Sarudzo yeWheelchair
Zvimwe zvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo paunenge uchitenga wiricheya zvinosanganisira kuremara kwako, rudzi rwemuviri, zera, murume kana mukadzi, mutengo, marudzi ezvishandiso uye kumhanya kwewiricheya.
Zvese izvi zvinhu zvakakosha zvakanyanya kana wave kuda kuita sarudzo yako yewiricheya. Ivo vachakubatsira kudzikisa sarudzo dzako zvakanyanya uye iwe uchasara nekusarudza kubva pakati pematatu kana mana sarudzo.
Chinonyanya kukosha ndezvaunoda Mazuva ese
Usabatwe mumhando yechangobva kuitika kana kunyange mutengo. Uchadaro kushandisa wiricheya iyi kweinenge makore mashanu anotevera, saka zvinonyanya kukosha kuti usarudze imwe inonyatsoenderana nezvido zvako.
Saka unogona kunge uchizvibvunza kuti unofanira kutenga wiricheya itsva here kana kuti yakamboshandiswa? Hazvina hazvo basa asi unotofanira kutarisa zvaunoda. Kutenga yakashandiswa kune mukana wekuti haidhure.
Chero bedzi wiricheya yakashandiswa ichizadzisa zvese zvaunoda, unogona kupedzisira wachengeta mari yakawanda nekufamba kwenguva. Iva nechokwadi chekuti wakanyatsoita usati waita kutenga kwekupedzisira.
Akashandisa Mawiricheya Anofanira Kutariswa Zvakakwana Usati Watenga
Mamwe mawiricheya akashandiswa semawiricheya emagetsi anozoda kuongororwa padyo. Chimwe chezvinhu zvakakosha chauchazoda kuti utarise zvakanyanya ibhatiri rayo. Simbisa kuti vachiri kushanda uye kubata chaji nemazvo.
Zvaitove nani dai vaive vatsva. Chimwe chinhu chakakosha kutarisa muwiricheya yakashandiswa iwaranti. Usatenge wiricheya yakashandiswa pasina waranti. Nenzira iyo kana uine matambudziko pasi pemugwagwa iwe uchavharwa.
Kutenga wiricheya yakashandiswa nemaoko kuri nyore sezvo pasina mabhatiri kana mota dzinobatanidzwa. Chero wiricheya yaunosarudza kuenda nayo, iva nechokwadi kuti ine zvinhu zvese zvaunoda kuti chiitiko chako chewiricheya chive chakachengetedzeka uye chakagadzika.